Ururka SOLJA Oo Tababbarro Saxaafadeed Kuqabtay Gobollada Sool & Sanaag – SOLJA
Home / Activity / Ururka SOLJA Oo Tababbarro Saxaafadeed Kuqabtay Gobollada Sool & Sanaag
Ururka SOLJA Oo Tababbarro Saxaafadeed Kuqabtay Gobollada Sool & Sanaag
Abdishakur Mohamud December 22, 2015	Activity, Training Leave a comment 174 Views
Ceerigaabo(SOLJA) Ururka Suxufiyiinta Somaliland Ee Solja ayaa maanta 21/12/015 waxay Magaalo-madaxyada Gobollada Sool (Laascaanood) Iyo Sanaag (Ceerigaabo) tababbar kusaabsan sharciga iyo
mas’uuliyadda xorriyadda baahinta saxaafadda uga fureen 45 weriye oo ka kala socdey qaybaha warbaahinta gobolladaas ka hawlgasha ee kala duwan.
Tababbarradan oo socon doona muddo laba casho ah ayaa waxa furitaannadoodii manta/shalay kazoo qayb galay Mas’uuliyiinta laamaha kala duwan ee dawladda, madadax dhaqameedyada, aqoonyahanka iyo marti-sharaf kel oo tiro badan.
“Tababbarkan Waxa Weriyayaasha u qabtay Ururuka Suxufiyiinta Somaliland Ee Solja Waxana manta halkan hortiinna fadhiya weriyayaasha isaga kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka Sanaag marka laga reebo Degmada Laasqoray”. Sidaas waxa yidhi Wakiilka Ururka Solja ee G/Sanaag C/laahi Xuseen Darwiish oo ka hadlayey munaasibaddii furitaanka tababbarkan ee magaalada Ceerigaabo.
Wuxuna Wakiilka intaas kusii daray “Waa markii kowaad ee kulan noocan oo kale ay meel isugu yimaaddaan weriyayaasha dhammaan degmooyinka goboolka Sanaag waxanna rajaynayaa in arrintani wax badan ka tari doonto isdhexgalka iyo walaalaynta warbaahinta iyo bulshadaba waxannuna halkan uga mahad celinaynaa maammulka sare ee Ururka Solja oo beryahan ugu danbeeyey dhexda u xidhay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoonta mihnadda saxaafadeed ee weriyayaasha”. “Waxannu kaloo u mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatey tababbarkan weriyayaasha gobolka Sanaag”.
Dhinaca bulshada iyo aqoonyahanka oo ay halkaas ka hadleen Boqor-Feysal Cismaan Faarax, Prof-Mustafe Saalax X. Xasan Axmed Cali Xasan (Cadami) iyo C/raxmaan Dawaarre ayaa iyaguna dhammaantood so dhoweeyey tababaarkan Solja u qabanayso weriyayaasha gobollada waxayna weriyayaasha ku boorriyeen in aqoonta ay helaan ay uga faa’iideeyaan bulshadooda, kuna saleeyaan wararkooda xaqiiqada markaas taagan.
Ugu danbayntii Kusimaha Badhasaabka G/Sanaag Ismaaciiikl Cabdi Xasan oo ka hadlayey munaasibaddan furitaanka tababbarka ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxa hadalladiisii kamid ahaa
“Waxan si weyn usoo dhowaynayaa ugana mahadcelinayaa madaxda Ururka Solja Tababbarkan ay manta u qabteen weriyayaasha dhammaan gobolka sanaag Waxan leeyahay waa tallaabo loo baahnaa”. “Weriyayaasha kazoo qaybgalayna waxan ku boorrinayaa inaad noqotaan kuwo horumarka nagala shaqeeya oo xaqiqada sheega cid kastoo qalad gashana waad sheegi kartaan laakiin wararkiinnu xaqiiq ha ahaadeen”.
Previous SOLJA, Government & Judiciary reach understanding to address Media concerns
Next SOLJA oo war-saxaafadeed ka soo Saartay Doorka Saxaafadda ee Khilaafaadka iyo Xaaladaha Taagan
Burao-A two day Capacity Building for Journalists on Press freedom & and freedom of speech ...